Wararkii ugu dambeeyay degmada Afgooye kadib dagaalo halkaasi ka dhacay iyo sida ay xaaladdu saakay tahay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay degmada Afgooye kadib dagaalo halkaasi ka dhacay iyo sida ay xaaladdu saakay tahay
Wararka saakay ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose ayaa waxay sheegayaan in xaaladda degmadaasi ay maanta tahay mid aad u degan, kadib dagaal gelinkii dambe halkaasi ku dhexmaray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo garab ka helaaya kuwa AMISOM iyo dagaalyahanno ka tirsan Al-shabaab.
Dagaalkaasi oo markiisii hore ku bilawday weerar ismiidaamin ah oo ay dagaalyahanadda Al-shabaab ku qaadeen saldhig boolis ah oo ku yaala buundada degmada Afgooye, ayaa markii dambe isku badalay weerar afar geesood ah oo ay Al-shabaab qaadeen.
Ciidankii huwanta ee halkaasi lagu weeraray ayaa dagaalyahanadda Al-shabaab la galay dagaal fool ka fool ah, waxaana ugu dambeyn halkaasi muddo saacado ah kula wareegay dagaalyahanadda Al-shabaab, oo dhowr xarumood halkaasi ku yaala si xoog ah ku galay.
Muddo saacado ah kadib, waxaa degmada Afgooye dagaal rogaal celis ah kusoo qaaday ciidamada huwanta ah, iyagoona kadib degmadaasi ka saaray dagaalyahanadda Al-shabaab oo markii hore gacan ku haynta halkaasi la wareegay.
Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa maanta ku sugan dhamaan degmada Afgooye, iyadoona sidoo kale la sheegayo in dagaalyahanadda Al-shabaab ay haatan ku sugan yihiin meel aan sidaasi uga fogeyn degmadaas.
Dadka ku geeriyooday dagaalkaasi ayaa waxaa ka mid ahaa taliyeyaal ciidan iyo isu-duwihii wasaaradda maaliyada gobolka Sh/hoose ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamuud Daahir Qooley.
Saraakiisha sidoo kale ee ku geeriyootay dagaalkaasi ayaa kala ahaa, Gaashaanle Axmed C/qaadir (Gorod), Korneel Cabdi Xasan Cabdulle (Boqol) iyo sidoo kale Cali Cabdi Yuusuf.
Qasaaraha guud ee dhimashada dagaalkii shalay ayaa la sheegayaa inay gaareyso ilaa 15 qof oo ka kala tirsan labada dhinac iyo dad shacab ah, iyadoona sidoo kale ay jiraan tiro dhaawacyo ah oo intaasi ka badan.
Dhinaca kale, Xarakada Al-shabaab ayaa shaacisay in dagaalkii shalay ee degmada Afgooye ay ku dileen ciidamo badan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo kuwa Midowga Africa ee halkaasi ku sugnaa.
Sidoo kale, isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ee ka jiray degmada Afgooye ayaa saakay u muuqda mid caadi ah, inkastoo ay jirto cabsi laga qabo in dagaalyahanadda Al-shabaab ay dagaal rogaal celis ah halkaasi kusoo qaadaan.
Si kastaba ha ahaatee, waa markii u horeeysay oo ay dagaalyahanadda Al-shabaab muddo saacado ah la wareegaan degmada Afgooye, tan iyo markii halkaasi laga saaray muddo afar sano kahor, lamana oga sida uu ku dambeyn doonno xaalka degmadaasi.